'युवाको नेतृत्व अघि बढेमात्र देश विकास सम्भब छ' • Nepal's Trusted Digital Newspaper'युवाको नेतृत्व अघि बढेमात्र देश विकास सम्भब छ' • Nepal's Trusted Digital Newspaper
हाम्रो देश नेपाल विश्वमा आफ्नो अस्तित्वको पुरानो र लामो इतिहास बोक्ने राष्ट्रहरूमध्येको देश हो । लगभग ५ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको र विश्वलाई नै कुनै समय कला र सभ्यताको पाठ सिकाएको राष्ट्र नेपाल आज पनि विकासका सपनाहरू बुनेर समृद्धिको बाटो कुरेर बसेको छ । हाम्रो देशमा धेरै स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा हुन सकेको छैन, श्रोतसाधन नभएकै कारण पक्कै होईन जबकि विश्व समुदायमा हामीसँगै आधुनिक इतिहासमा प्रवेश गरेका कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया, भारत जस्ता राष्ट्र समृद्धिका मामिलामा निकै अगाडि बढिसक्दा हामी समृद्ध राष्ट्र त सम्झिने मात्र भएको छ ! देश समृद्ध हुन नसक्नुको कारण नै पुरानो दल र पुरानै नेता बाट विकासको आश राख्नु नै हाम्रो ठूलो भूल हो ! हामीले अहिलेसम्म यस्ता जनप्रतिनिधीहरु छानिरहेका छौँ कि उसलाई विकास निर्माणको काम त के चुनाव जितेपछि के काम गर्ने समेत थाहा हुँदैन ! भ्रष्टचार र आफन्तबादमा चलिरहेको हाम्रो समाज आज पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर नेताको झोला बोकेर हिँडिरहेका छौँ ! सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन ।
यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गरिने विभिन्न परामर्श सेवा खरिद, सेवा खरिद तथा विकास निर्माण कार्यका लागि गरिने ठेक्का सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कार्य प्रमुख हो । विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पुर्याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर/सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिसन लिने, पूर्वाधार विस्तार, मर्मत–सम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटाला गर्ने, निर्माणका लागि सामान खरिद गर्दा/गराउँदा कमिसन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितका लागि सार्वजनिक निर्णय गराउने जस्ता कार्य नै विकास नहुनुको प्रमुख कारण हो ।
विश्व सर्वहारा वर्गका महान गुरु मार्क्सले भनेका थिए – ‘युवाहरू हो! जिते संसार छ, हारे केही पनि छैन’ भनेर जित्नका लागि संसारभरका युवा वर्गमा आव्हान गरेका थिए। यो यथार्थता बहुसंख्यक श्रमजीवी किसान मजदुरहरुले भरिएको नेपालका श्रमिकका सन्तति युवाहरुको सन्धर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक थियो, छ र रहिरहने छ।
कतिपयले राजिनितिलाई फोहोरी खेल भनेर चिन्ने गर्छ्न, तर राजिनिती फोहोर होईन राजिनिती गर्नेहरु फोहोरी हुन! राजनितिलाई दुशित बनाउने नेताहरुको कारण नै हाम्रो मनमा राजिनिती नराम्रो खेल भन्ने भ्रम भएको छ ! हिजोसम्म पछि गएर मन्त्री , प्रधानमन्त्री बन्नु भन्दै आशीर्वाद दिने नेपाली समाजले आज राजनिती गर्ने होइन, डाक्टर र इन्जिनियर बन्नु भनेर आशिर्वाद दिन्छ।
यसरी हिजो युवाको योगदानबाट बाचेको मेरो देश नेपालमा आज तिनै क्षमताका प्रतिमुर्ति युवालाइ राजनीतिमा समावेश गराइएको छैन।ठूला राज्नितिक दल भनिनेहरुले राजिनिती त दुषित बनाए, पुरै देश विकास गर्न पुग्ने सम्पती नेताहरु आफुले मात्र भ्रष्टचार गरेर १२ पुस्तालाई पुग्ने सम्पती ओगटेर राखेको पाईन्छ ! युवा समूह राजनीतिक दलहरूका मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले हरेक दलको युवा दस्ता हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको प्रत्येक कार्यक्रम/अभियान/आन्दोलन सफल पार्न युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । तर राजनीतिक दलहरूले भने युवालाई हतियारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् ।
युवा भनेको उनीहरूको स्वार्थसिद्धिको माध्यम मात्र भएका छन् । सबै भ्रातृ युवा स·ठनहरू माउ पार्टीको इशारामा चल्ने रोबोट बनेका छन् । हडताल, जुलुस, चक्काजाम वा अरू पार्टी तर्साउने काममा मात्र युवाहरूलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । युवाहरूलाई नै लक्ष्यित गर्दै सर्वहारा वर्गका अर्का महान गुरु क. माओले- ‘यो संसार तिमीहरुको पनि हो, हाम्रो पनि हो, तर अन्त्यमा तिमीहरुकै हो’ भनेर संश्लेषण गरेका थिए। वास्तवमा, युवाहरू नै राष्ट्रको परिवर्तनगामी शक्ति हुन्।
त्याग, निष्ठा, बलिदान र नव-निर्माणको सुन्दर भावनाद्वारा प्रतिबद्ध युवाहरू राष्ट्रको अमुल्य निधि एवम् उदयीमान् शक्ति मानिन्छ। युवाहरू स्वभावैले विद्रोही हुन्छन्। उनीहरुको नशा-नशामा क्रान्तिकारी परिवर्तनको नविन उर्जाहरु सल्बलाईरहेको हुन्छ। यथास्थितिबाट आफू र आफ्नो समाजमा मुक्ति दिँदै सामाजिक रुपान्तरणको महाअभियानमा समेत युवा वर्गले अग्रिम भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन । युवालाइ राजनितिक माहोलमा समावेश गराएर नेतृत्व सुम्पिने हो भने युवामा आत्मबल बढाउने हो भने देशको उज्ज्वल भबिष्य निर्माण हुन सक्छ। राजनितिक दलहरुले नै आफ्ना नेताहरुलाइ दबाब दिने हो भने युवाको समावेश राजनितिमा सुनिश्चित देखिन्छ। अब पनि हामी नेपालिमा युवा राजनितिको चेतना भएन भने हामिले दासत्वको जिन्दगी अङाल्नु पर्ने सम्भावना बढेर जान्छ।
हामी नेपाली जनता जब निर्वाचन आउँछ अनि दुई हात जोडेर आउने त्यही बर्षौ देखिका नेतालाइ भोट हाल्छौ अनि जिताउछौ र समृद्धिको सपना देख्छौ। हजारौं बर्ष देखि विकास नगर्ने नेतालाइ विकास गर्छन भन्ने आशले पटकपटक जिताउने गर्छौँ अनि भन्छौँ ” देशमा विकास कहिल्यै आएन” ! साँच्चिकै विकास र समृद्ध नेपाल चाहन्छौ भने युवा राजनितिमा समावेश हुनुपर्छ। तसर्थ अब युवा शक्तिलाई निराशामा होइन, आशामा बदल्नुपर्छ। जे-जे भयो, भयो। अब विगतको चिन्ता होइन, भविष्यको चिन्तन गर्नुपर्छ। जय-जयकार होइन, स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्दछ।